Akpa sachets na -esi ísì kabinet | Arụrụ aka na -aga
Nke Torres | | Crafts na akwa, Ọrụ ụlọ
Akpa akwa ndị a na -esi na kabinet na -esi ísì ụtọ bụ ezigbo ihe nkwado iji tinye n'ime kaboodu ma ọ bụ akwa ọ bụla ebe ị na -echekwa akwa. Ha dị mfe ime nke ahụ n'otu ehihie ahụ ị nwere ike ịme ọtụtụ akpa dịka ịchọrọ, n'ihi na ha bara uru, mara mma na ọbụna zuru oke maka onyinye.
N'ihi na kaboodu ọ bụla nwere ike ijide isi, n'ihi iru mmiri n'etiti ihe ndị ọzọ wee nwee freshener ikuku Eke n'etiti akwa ga -egbochi isi ahụ ịrapara na akwa. Ọ dịghị mkpa iji kemịkalụ na enweghị nka nka, ị nwere ike ịmepụta fresheners ikuku maka kabinet n'onwe gị. Tụkwasị na nke a, ha mara mma nke ukwuu na ọ bụ ihe obi ụtọ imeghe kọbọd wee chọta akpa akwa ndị a.
1 Akpa ákwà maka kaboodu, freshener anụ ahụ arụrụ n'ụlọ
1.1 Nzọụkwụ site na nkwụsị
Akpa ákwà maka kaboodu, freshener anụ ahụ arụrụ n'ụlọ
Ihe ndị anyị ga -achọ bụ:
Fabric nke motifs nke nhọrọ gị, ọ nwekwara ike ịdị larịị. Ihe anaghị adị mkpa, mana owu ka mma
Potpourri ma ọ bụ okooko osisi kpọrọ nkụ
Mgbakwunye maka akwa
Ihe akara akwa
Ihe eriri satin
Liquid dị mkpa lavender, cinnamon, ma ọ bụ isi kacha amasị gị
Nke mbụ anyị ga -ese ihe nha na akwa ahụ dị mkpa iji mepụta akpa akwa. Ihe nha ndị a bụ ihe ziri ezi na ọ dịghịdị mkpa ka ọ bụrụ nke ziri ezi.
Anyị na -ebipụ akwa abụọ iji mepụta akpa ọ bụla nke akwa. Anyị na -ebipụ ọtụtụ akwa dị ka anyị chọrọ, ha nwere ike ịdị nha.
Anyị na-eche ihu iberibe akwa na tinye uwe mmesapụ aka nke akwa nrapado. Anyị na -etinye akụkụ abụọ ahụ wee pịa. Ị nwere ike tinye ụfọdụ akwa ákwà iji kwado otu ahụ mgbe gluu na -akpọnwụ.
Anyị na -emekwa obere oghere n'ọnụ ụzọ dị n'elu, yabụ na ọ ga -akpachapụ anya. Anyị na -emegharị usoro ahụ na iberibe akwa niile, ruo mgbe ị nwere ọtụtụ akpa akwa akwa ka ịchọrọ ịme.
Anyị na -ahapụ ka nrapado kpoo kpamkpam, mgbe ọ dị njikere, anyị na -atụgharị akpa akwa.
Anyị na -ejupụta okooko osisi akpọnwụ akpa akpa ma ọ bụ potpourri. Agbanyeghị na ha enweela isi, anyị na-agbakwunye ntakịrị mmiri mmiri ka ihe na-esi ike ka ọ na-adịgide ma na-adịte aka.
Anyị na -eji eriri na -agbanwe agbanwe emechi akpa akwa. Anyị na -ebipụ otu satin rịbọn wee kechie ya na elastic iji chọọ akpa anyị na -esi ísì ụtọ mma maka kabinet. Na njikere, anyị adịlarị akpa anyị dị njikere idowe na akwa akwa, drawer nke ihe ndina ahụ na ọbụlagodi, iji chọọ shelf mma wee si otú a mee ụlọ gị ihe ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ọrụ ụlọ » Akpa ákwà iji na -esi kabinet mmanụ
Hippie pendant ji CD
Ibe edokọbara roba